Wednesday June 20, 2018 - 21:37:46 in Wararka by Super Admin
Markii ugu horraysay dowladaha Itoobiya iyo Ereteria ayaa yeelanaya wadahadal fool ka fool ah kadib 20 sanadood oo xurguf siyaasadeed udhaxaysay.
Madaxweynaha dalka Eratariya Esiyaas Afewerki, ayaa goor sii horeysay ku dhawaaqay in uu diyaar u yahay wada hadal uu la galo Itoobiya.
Sida ay faafisay wakaaladda wararka AP Ereteria waxay diyaar u tahay in wafdi nabadeed ay udirsato magaalada Addis Ababa si uu ugu gogol xaar wadahadal lagusoo afjarayo dagaalka lagu hoobtay ee labada dal u dhaxeeya.
Ilo wareedyo diblumaasiyadeed ayaa sheegaya in hoggaamiyaha cusub ee Itoobiya uu hoggaanka Asmara ugu gacan haatiyay wadahadal islamarkaana ay socdaan dadaallo lagu doonayo in lagu kala qaado ciidamada isku hor fadhiya xuduudda labada dal wadaagaan oo marti geliyay dagaal ay ku dhinteen ku dhowaad Nus milyan qof oo labada dhinac ah
Tallaabadan ayaa waxaa Eratariya ku kallifay kadib markii ay aragtay laba qodob oo meesha ka saaray shakigii ay ka qabtay Itoobiya, Waa midka kowaade, Itoobiya ayaa ka tanaasushay dhul ay ka haysatay Eratariya, Sidoo kale Itoobiya ayaa bad iyo Dekedo ka heshay Soomaaliya, tanina waxay meesha ka saartay tuhunkii Eratariya ay ka qabtay in Dekedeeda la dhoco.
Haddaba Ereteria oo dowladda ka talisaa aaney muslim ahayn ayaa Dekedeeda ku aamini weysay Itoobiya, Soomaaliyana oo boqolkiiba boqol muslim ah inta ka baxday mooyaane waxaa laga siiyay afar dekedood.
Hoggaamiyaha Maamulka 'Puntland' oo ku dhawaaqay Golaha Wasiirrada Maamulkiisa.